njem njem Archives | Save A Train
Home > traveltips
Oge Ọgụgụ: 5 nkeji Obodo ịhụnanya oge ochie, ubi mara mma, oghere ndị mara mma, na -adọta ọtụtụ nde ndị njem nleta na Europe kwa ụbọchị. Ndị njem si n'akụkụ ụwa niile na -eleta Europe ka ha nyochaa akụkọ ihe mere eme na ịma mma ya wee hụ onwe ha ka ndị aghụghọ dị n'akpa uwe ndị ama ama na ama ama ama ama na Europe.. Nọrọ na nchekwa n'oge gị…
Travel Europe, Travel Atụmatụ
Oge Ọgụgụ: 9 nkeji Iswa mara ezigbo mma, ma ndị njem oge mbụ nwere ike ịdaba na ọnyà ndị na-eme njem nlegharị anya wee bụrụ ndị isi ihe ojoo na-eme. Ndị a bụ ndị 12 isi wayo iji zere ụwa niile; site na Europe ruo China, na ebe ọ bụla ọzọ. Transportgbọ njem ụgbọ oloko bụ ụzọ enyi na enyi…
Zụọnụ Ndụmọdụ, Travel Europe, Travel Atụmatụ
site Ela Williams
Oge Ọgụgụ: 4 nkeji Were ya na ị na-eme atụmatụ ịga European Union n'oge ọ bụla. Na ikpe, enwere usoro nke usoro na ozi njem dị oke mkpa ga-enyere aka mee ka ahụmịhe gị na-atọkwu ụtọ. Mmadu puru iche na o nweghi ike ibu nnukwu…
Oge Ọgụgụ: 7 nkeji Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ njem mbụ gị na Europe, e nwere ihe ole na ole ị chọrọ ịma banyere obodo ndị kachasị mma n’ụwa. anyị mere atụmatụ zuru oke maka 10 emehie njem ị kwesịrị izere na Europe. A njem ka…
Kachasịsịsịshia Ntụziaka Ka Tipping Na Europe
Oge Ọgụgụ: 6 nkeji Gburugburu ụwa, tipping nwere ihe dị iche iche pụtara na omume, ọmụmaatụ: Ọ dị na South Africa chọrọ, dị ka ọ dị na USA. A na-atụ anya ka ị hapụ onu nke dị n'etiti 15 na 25% na America, ma ọ bụrụ na i meghị ya, ị pụrụ nnọọ…
Ndụmọdụ kachasị mma maka njem mgbe ị dị ime
Oge Ọgụgụ: 7 nkeji Pregnantbụ nwanyị bụ otu n'ime oge kachasị dị ụtọ nke ndụ gị. Ọ na-eme, Otú ọ dị, were ụfọdụ mgbochi. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ njem mgbe ị dị ime. Ibu na iwulite nwatakiri na-egbochi ụdị ụgbọ njem ịnwere ike iji gbaa, karịsịa mgbe…
Europe ga-ahụ ebe ofufe
site Abi Proud
Oge Ọgụgụ: 5 nkeji Europe bụ n'ụlọ ka otu n'usoro nke omenala akụkọ ihe mere eme na breathtaking ije, ọtụtụ nke na-weghaara site na Afrika nke ukwu collection of ebe ofufe. Ọ bụ ya mere taa, anyị na-na mechie elu 3 na anyị na-atụle ịbụ zuru kwesịrị-na-ahụ, ekpuchi ụlọ ndị a ma ama n'ụwa gafee ụfọdụ…
Business Travel site Train, Inzọ Njem Italytali, Ingbọ ologo Spain, Zụọnụ Ndụmọdụ, Ingbọ njem njem Turkey, Travel Europe
Oge Ọgụgụ: 6 nkeji Naples bụ a magburu onwe, quintessential Italian obodo. Ọ na-ejupụta na ugwu nta, ochie ụlọ, na ndị ọzọ na obere na cute ebube. Ọ bụ nnoo zuru okè Italian obodo ahụ maka onye ọ bụla chọrọ iji na-enweta ezigbo Italian mmụọ na nke kacha mma ụbọchị njem si Naples. Otú ọ dị,…
Oge Ọgụgụ: 6 nkeji Ọ bụrụ na ị ka malitere na-eme atụmatụ a njem site Bavaria na Germany, eleghị anya ị na-eche echiche banyere njegasi. Ị na-yikarịrị bụkwanụ na Ọnụ ọgụgụ buru nke ịtụnanya ebe nleta. Plus, ị chọrọ dabara ha niile na a 10 ụbọchị njem…
10 N'otu oge na A Lifetime Destinations
12 Ebe ndị njem oge mbụ kacha mma
12 Ebe ụmụ agbọghọ kacha mma n'ụwa niile
12 Ụlọ nsọ Kasị ochie n'ụwa niile
12 Ebe kacha mma maka ndị hụrụ naanị ya n'anya